Sheekooyinkii Cigaal Shidaad!! - SomaliNet Forums
Board index Literature - Fanka iyo Suugaanta Literature - Somali Language
Sheekooyinkii Cigaal Shidaad!!
Postby IRONm@N » Sun Mar 08, 2009 1:11 am
Cigaal Shidaad oo qurigiisa iska jooga iskana bashaalaya shaahna iska cabaya Waxaa hortiisa ku ciyaarayay wiil yar 2 sano jir ah oo uu dhalay. Wiilkii baa farxad daradeed kusoo cararay aabihiis. Cigaal markuu arkay wiilkii oo soo guurguuranaya intuu qeyliyay xaaskiisana ku yiri naa ragga la iskuma sii daayee wiilka iga ninka iga qabo!
Goor lagu jiro xaalad colaad ayaa cigaal loo sheegay in niman doonayaan. Markaasuu intuu gurigii yimid xaaskiisii waydiiyey in wax rag ah raadinaayeen. Xaaskiisii waxay tiri nimanbaa kuu yimid oo aanan garaneynin. Markiiba cabsi iyo shaki ayaa ku biloowday cigaal. Wuxuu xaaskiisii ku yidhi buste i saar dushana caano dhanaan kaga shub si duqsigu uu ugu bato, oo haday ragii soo laabtaan oo ikaa waydiiyaan waxaad ku tiraahdaa waa dhintay. Qadaryar dabadeed ayaa niman yimaadeen, waxay waydiiyeen xaaskii in cigaal joogo, waxay tiri cigaal waa dhintey, waxay yiraahdeen goorma ayuu dhintey cigaal, kadibna way yara aamustay, (ileen cigaal waqtigaa ku dheh muu ku orane) inteysan u jawaabinba cigaal ayaa soo booday oo yiri "naa shalay dheh, shalaan dhintey dheh"
Re: Sheekooyinkii Cigaal Shidaad!!
Postby Kramer » Mon Mar 09, 2009 11:52 pm
Sheekooyinkii Cigaal Shidaad iyo dhegdheer
by somaliscarface » Thu May 29, 2008 9:19 am » in General - General Discussions
by somaliscarface » Thu May 29, 2008 9:17 am » in Europe - UK
Sat May 31, 2008 1:18 pm
compilations of cigaal shidaad.
by eliteSomali » Thu Mar 01, 2012 11:19 pm » in General - General Discussions
Thu Mar 01, 2012 11:19 pm
Sayid iyo Cigaal shidaad: One of the Same?
by HooBariiska » Tue Jul 27, 2010 10:19 pm » in Politics - Somaliland
Wed Jul 28, 2010 2:59 am
I had an Cigaal Shidaad moment on the train
by Adali » Sun Jun 21, 2015 4:48 am » in General - General Discussions
Sun Jun 21, 2015 7:02 am
Real Cigaal shidaad (video)
by Cumar-Labasuul » Thu Nov 01, 2012 10:23 am » in General - General Discussions
by Based View the latest post
by Lamagoodle » Sat Apr 25, 2015 11:06 pm » in General - General Discussions
by Lamagoodle View the latest post
Cigaal Shidaad iyo Libaax, Must Watch Video
by zackabdul » Sat May 31, 2008 8:24 pm » in General - General Discussions
Sat May 31, 2008 10:24 pm
by IRONm@N » Sat Mar 07, 2009 6:44 pm » in Literature - Somali Language
Wed Mar 11, 2009 2:29 am
Sheekooyinkii Sayid Mohamed
by IRONm@N » Thu Mar 12, 2009 12:35 am » in Literature - Somali Language
Return to “Literature - Somali Language”